Xassan Daahir Aweys oo guri laga dajiyay Magaalada Cadado iyo Ciiddamo badan oo wadooyinka lagu daadiyay – idalenews.com
Wararka ugu dambeeyay ee aan ka heleyno Magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud Xarunna u ah maamulka Ximan iyo Xeeb ayaa sheegaya in Sheikh Xassan Dahir iyo Saraakiil la soctay la dajiyay guri ku yaalla Magaallada.
Saraakiisha Sheikh Xassan Daahir Aweys la socto ayaa waxaa kamid ah Afhayeenkii Ururkii dhacay ee Xisbul Islaam Maxamed Cismaan Caruus iyo Saraakiil kale oo horay uga mid ahaa Xisbiga.
Wararka ayaa sheegaya in Magaalada Cadado amaankeeda si aad ah loo adkeeyay, ayadoona la tilmaamayo in guri laga dejiyay Xassan Daahir iyo saraakiisha la socota magaalada gaar ahaan meel aan sidaa uga fogeyn xarunta madaxtooyada ee maamulka Ximan iyo Xeeb.
Waxaa la filayaa in gelinka dambe ee maanta ay si wada jir ah shir jaraa’id u qabtaan Xassan Daahir Aweys, saraakiisha la socta iyo madaxda maamulka Ximan iyo Xeeb, iyadoona joogitaanka Xassan Daahir ee Cadaado ay warar kala duwan kasoo baxayaan.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Xassan Daahir uu ka duuli doono Cadaado isgoona ku wajahan Magaalada Doha ee dalka Qadar waxaana la tilmaamayaa in Doha ay ku sugayaan Sheekh Cumar Iimaan Abuubakar iyo Sheekh Maxamed Macalin kuwaasi oo kamid ahaa Hoggaamiyayaashii Xusbul Islaam, hayeeshe wax weliba waxa ay kala cadaan doonaan marka uu Xassan Daahir la hadlo saxaaafada.
Ugu dambeyntii, Shacbiga ku nool Magaallada Cadaado ayaa waxa ay dhagta ku hayaan Idaacadaha iyagoona is weydinaayo halka ay xaaladu ku biyo shuban doonto.